Khilaafka Masar Iyo Itoobiya Ee Biyo-xireenka Nile Oo Xoogeystay -...
Wasiirka waraabka dalka Masar ayaa sheegay in Isniintii uu ka helay ogeysiis rasmi ah dalka Itoobiya, kaas oo ku saabsan in ay bilaabeen buuxinta kaydka biyo-xidheenka weyn ee loo yaqaan GERD sanadkii labaad.
Baaxadda biyaha uu qaadanayo biyo-xireenkan waxay ku xirnaan doontaa xaddiga roobabka ka da’a Itoobiya. “Ma aragno wax saameyn ah oo hadda laga dareemayo Webiga Nile. Waxay qaadaneysa bil ama bil iyo bar” ayuu afhayeen u hadlay Wasaaradda Waraabka ee Masar oo la yiraahdo Maxamed Ghanim u sheegay telefishanka maxalliga ah ee dalkaas.
Hoggaamiyaha Maleeshiyaad ay taageerto Iiran oo u hanjabay Mareykanka…